वानडे सिरिजः टस हारेर ब्याटिङ गर्दै भारत, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
वानडे सिरिजः टस हारेर ब्याटिङ गर्दै भारत, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौंः भारतविरुद्धको तीन खेलको एकदिवसीय क्रिकेट सिरिजको पहिलो म्याचमा अष्ट्रेलिया टस जितेर बलिङ रोजेको छ । भारत–अष्ट्रेलियाबीचको खेल १ः४५ बजेदेखि मुम्बईमा सुरु हुँँदैछ ।
अष्ट्रेलिया र भारतबीचको पछिल्लो ५ वानडे म्याच हेर्ने हो भने भारतले २ खेलमा मात्र जित हासिल गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस भातविरुद्ध होपको अर्धशतक, बलियो अवस्थामा वेस्ट इन्डिज
पहिलाे खेलमा अष्ट्रेलियाको प्लेइङ ११ः डेविड वार्नर, आरोन फिन्च (कप्तान), स्टिभ स्मिथ, मार्नस लाबुस्ने, एलेक्स क्यारी, एस्टन टर्नर, एश्टन अगर, प्याट कमिन्स, मिचेल स्टार्क, केन रिचर्डसन र एडम जम्पा ।
पहिलाे खेलमा भारतको प्लेइङ ११ः शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पन्त, श्रेयस अय्यर, रवीन्द्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, र जसप्रीत बुमराह ।
याे पनि पढ्नुस अन्तिम वानडेमा अष्ट्रेलियाद्वारा दक्षिण अफ्रिकालाई २५५ रनको लक्ष्य